LG G3 Stylus, ဗီဒီယိုဖိုင်အတွက်သင့်အတွက်ပါ Androidsis
Alfonso က de Frutos | | IFA, LG, reviews
LG ၏ရပ်တည်ချက်သည် IFA 2014 ၏ဤထုတ်ဝေမှုတွင်အလုပ်အများဆုံးတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်o Watchoso, G စောင့်ကြည့်ရေး R ကိုသို့သော်ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှစက်ဘီးဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အတူစမတ်နာရီအကြောင်းပြောမည်မဟုတ်ပါ LG G3 Stylus.
ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G3 Stylusaကိုစဉ်းစားနိုင်သည် G3 ၏အလွန်ပါးလွှာသောဗားရှင်းဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ terminal ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်သောနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်ကို ဦး တည်။ စဉ်းစားသည့်အခါ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြည့်မီစေသည်။ ရူပဗေဒအရ LG G3 နှင့်ဆင်တူသည့်စမတ်ဖုန်းကို၎င်း၏ metallic effect casing နှင့်ကောင်းမွန်သောဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ ဤကိစ္စတွင် G3 ဖန်သားပြင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည့် bezels အနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မနှစ်သက်ပါ။
၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Stylus ပါဝင်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစား
နည်းပညာအရ LG G3 Stylus သည်အံ့ exactly စရာမဟုတ်ပါ။ ၉၆၀ x ၅၄၀ ပစ်ဇယ်နှင့်အတူ ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်, 1.3 GHz quad-core ပရိုဆက်ဆာနှင့် 1 GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 8 GB သာ micro SD card slot ရှိသော်လည်း
ဤကိရိယာ၏အဓိကဒြပ်စင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်တံတိုင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကို Note4အသစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကို၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သူ့ 8 megapixel ကင်မရာ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကိုလုံလောက်သောထက်ပိုသောဓါတ်ပုံများကိုဖမ်းယူပါ။ ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းက LG G3 Stylus ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုအလေးထားသည်။
စျေးနှုန်းနှင့်စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့ရက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် LG ကရည်ရွယ်ထားပါတယ် ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များ၌ LG G3 Stylus ကိုစတင်မိတ်ဆက် ဒါကြောင့်၎င်းသည်ကန ဦး တွင်ဘရာဇီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ရုရှား၊ အာဖရိကနှင့်အာရှသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ LTE ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်း၊ LG G3 Stylus သည် 3G ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းသည်အလွန်လေးနက်သောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။
စျေးနှုန်းကိုလည်းမသိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်၎င်းကိုရည်ရွယ်သည့်စျေးကွက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ယူရို ၂၀၀ ထက်ကျော်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်ဟာ touch screen နှင့် stylus ပါတဲ့ဈေးချိုတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် LG G3 Stylus ကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံကိုအစကရောက်မလာသေးပေမယ့်အင်တာနက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်ပစ္စည်းကိုမဆို ၀ ယ်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကောင်းကောင်းသိတယ်။ ပြီးတော့ LG G3 Stylus ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 Stylus၊ ဤစမတ်ဖုန်းကိုဗွီဒီယိုတွင်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
Pepito Perez ဟုသူကပြောသည်
Pepito Perez အားပြန်ပြောပါ
Pepito, ဒါတင်ပြီးပါပြီ။ မင်္ဂလာအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်း !! အသိပေးခြင်းနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆဲလ်ဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်ကသာမိုက်ခရို SD ကို သုံး၍ ပြသနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ